Yintoni omele uyenze eMarrakech, uhambo oluya kubugqi belizwe laseArabhu | Ukuhamba kwe-Absolut
Kufuneka wenze ntoni eMarrakech
ULuis Martinez | | Morocco
Ngaphambi kokuba uthethe malunga nento oza kuyenza eMarrakech kunyanzelekile Bhenela kwiingqondo zakho. Kuba ukutyelela isixeko esikuMntla Afrika kukuzintywilisela kumoya onuka kamnandi, imifanekiso kunye neencasa ezifana neentsomi 'Ubusuku baseArabia'.
Isixeko sasebukhosini samandulo saseMorocco ecaleni Ngaba, IMeknes y Rabat, ibilikomkhulu le IiAlmoravids. Kwaye xa ezi zingenela uSingasiqithi waseIberia, iMarrakech yaba sisixeko esineemarike ezinkulu, amabhotwe kunye nezitiya ezintle, enobukhazikhazi obusagciniwe nanamhlanje. Ukuba ufuna ukwazi ukuba wenzeni eMarrakech, siyakumema ukuba usilandele.
1 Yintoni omele uyenze kwaye uyenze eMarrakech
1.1 Isikwere i-Djemaa el Fna, into yokuqala ekufuneka yenziwe eMarrakech
1.2 I-Mosque yaseKoutoubía
1.3 I-Ben Youssef Madrasa
1.4 I-El Badi Palace
1.5 Amangcwaba eSadies, utyelelo olubalulekileyo ekufuneka lwenziwe eMarrakech
1.7 Ibhotwe laseBahia
1.8 Royal Palace
1.9 Iimyuziyam, utyelelo olungenakuphepheka lokwenza eMarrakech
1.10 UDar Cherifa, umlinganiso kumdlalo waseMarrakech
1.11 Ngcamla i-gastronomy, enye yezinto zokwenza eMarrakech
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze eMarrakech
Idolophu yaseMorocco ikunika izikhumbuzo ezininzi ezinomtsalane. Kodwa eyona ndlela yokuyazi kukuhamba kwizitrato zayo ezinomdla IMedina okanye isixeko esidala, kubhengeziwe Ilifa lehlabathi, uyonwabele zonke iikona zayo. Uya kuyifumana iqulunqwe kukunyanzelwa okuthile iindonga ezibomvu Otshintsha umbala kuxhomekeke emini. Kanye kwi IKasbah (njengoko iMedina yaziwa njalo), uya kuba nakho ukubona iindawo ezinje ngezi siza kukubonisa zona.
Isikwere i-Djemaa el Fna, into yokuqala ekufuneka yenziwe eMarrakech
Nguye iziko lemithambo-luvo yobomi eMarrakech, indawo enkulu evulekileyo esembindini wedolophu yakudala. Ujikelezwe ngu iisokisi okanye iimarike ezisasazwa ngumsebenzi wazo ophambili, kuyo uya kuhlala ufumana zonke iintlobo zamagcisa kunye nabalinganiswa abanomdla. Kukho abagijimi, abadanisi, ii-acrobats, ijusi okanye abathengisi bokutya, kunye noogqirha bamazinyo.
Sicebisa ukuba uqale utyelelo lwakho eMarrakech kule ndawo. Yonke into esixekweni ijikeleze kwaye yeyona ndlela yokujonga indlela abantu bayo ababuqonda ngayo ubomi. Ukongeza, i-UNESCO ibhale isikwere kwindawo ye- Uluhlu lwabameli beLifa leMveli elingabonakaliyo leNkcubeko yoLuntu.
Iimitha ezimbalwa ukusuka kwisikwere sangaphambili, yile tempile inomtsalane eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX. Yakhelwe ngezitena kunye nelitye lentlabathi elibomvu, iyabonakala ukuba inomtsalane imayini amashumi asixhenxe eemitha ukuphakama. Ngokubhekisele ngaphakathi, inobuhle Imayini encinci okanye ipulpiti eqoshwe kwi-sandalwood kunye ne-ebony ngeempondo zendlovu kunye nesilivere.
I-Ben Youssef Madrasa
Njengoko uyazi, i-madrassa sisikolo seKoran kwaye siqhotyoshelwe kwi-mosque enegama elifanayo. Esi sakhiwo sakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX ngu USultan Abou Al Hassan, nangona ihlaziyiwe kakhulu ngabantu baseSaadi. Iyamangalisa intendelezo yokuzihlamba kunye nokuhonjiswa kwamagumbi ayo amaninzi, enziwe kakuhle nge-stucco, ngomthi womsedare, ngemabhile kunye nezinto zokugcoba.
I-El Badi Palace
Yakhiwa ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX ngu USultan Ahmed Al-Mansour ukukhumbula uloyiso lwabo ngokuchasene namaPhuthukezi kwi idabi lookumkani abathathu. Wayefuna ukuba yeyona nto ibalaseleyo. Ngapha koko, uEl Badi uthetha «Okungenakuthelekiswa nanto».
Khange ayenze kakubi kangaka. Kodwa, ngaphandle kwamathandabuzo, yayiyibhotwe eliphambili ekuhlala kulo iindonga kunye neplanade yemithi yeorenji. Omnye umlawuli wayalela ukuba idilizwe, UMoulay ismail, ukwakha kunye nentsalela yayo isixeko sobukhosi se IMeknes Ngenkulungwane XVII.
Amangcwaba eSadies, utyelelo olubalulekileyo ekufuneka lwenziwe eMarrakech
Isultan efanayo eyalela ukwakhiwa kwebhotwe i-El Badi yayalela ukuba kwakhiwe esi sikhumbuzo, enye yezona zindwendwelwe kakhulu eMarrakech okoko yafunyanwa ngo-1917. iinkulungwane.
Amangcwaba yenye yezona ntsalela ziseleyo esixekweni kwaye zahlulwe eMedina okanye eKasbah ziindonga. Eyona nto inomtsalane kuyo igadi entle ehonjiswe ngemibala eyahlukeneyo.
Ime emazantsi eMedina kwaye indala Ikota yamajuda yaseMarrakech. Yenziwe ngezitrato ezimxinwa kunye nezindlu ezineebhalkhoni, ubuninzi kwiindawo zeSemitic zedolophu yaseMorocco. Ungabona kwakhona kwindlu yesikhungu kwaye enkulu amangcwaba.
Njengomdla, siya kukuxelela ukuba uMellah uthetha "Indawo yetyuwa" kwaye ibhekisa kubunini-bukhosi obabunamaYuda asekuhlaleni kule mveliso ayifumene kwi iintaba zeatlasi.
Imbali encinci kunaleyo yangaphambili kodwa ubuhle ngakumbi le ndawo yesikhumbuzo yakhiwe ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Yayalelwa ukuba yakhiwe ngu U-Ahmed Ben Moussa, i-sultan's vizier, ukuzahlulela kwishweshwe alithandayo. Ngapha koko, igama lithetha "Ubuhle".
Yayingumsebenzi womyili owaziwayo U-Muhammad al-Mekki kwaye inamagumbi alikhulu elinamashumi amathandathu asasazwe ajikeleze intle Intendelezo ephakathi ihonjiswe kakuhle kwaye inequla. Ukongeza, ineehektare ezisibhozo ezimangalisayo kwigadi.
Nangona iMarrakech ingaselilo ikomkhulu lobukumkani, ikwanebhotwe lasebukhosini. Iyaziwa ngokuba Nika i-makhzen kwaye inemvelaphi yayo kwixesha le-Almohad, nangona ihlaziyiwe kwaye yenziwa yanamhlanje ngabo bonke ubukhosi obulawula iMorocco. Awuyi kukwazi ukuyindwendwela, kuba ukufikelela kwayo akuvumelekanga, kodwa kufanelekile ukuyibona ngaphandle.
Iimyuziyam, utyelelo olungenakuphepheka lokwenza eMarrakech
Isixeko seAtlas sinenani elilungileyo labo. Kodwa, ekubeni sithetha ngamabhotwe, siza kuqala ngokukubonisa uvuyo Nika uSi Said, Ehlala izindlu ze Imyuziyam yoBugcisa baseMoroccan. Ulwakhiwo lwayo lukwakhona ngenxa ye-vizier ebesithetha ngayo ngaphambili kwaye isusela phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX. Kubuhle bayo bangaphandle, yongeza izinto zangaphakathi ezintle kunye nomboniso omangalisayo wekhaphethi, i-looms, iigugu, iinkuni kunye nezinye izinto zobugcisa bendabuko ezivela kwilizwe laseAfrika.
Intendelezo engaphakathi yeNdlu yeBahia
Sikucebisa ukuba undwendwele iMarrakech IMyuziyam yaseMajorelleEfumaneka edolophini ekwelo gama inikezela nengqokelela yezinto ezixabisekileyo ezivela kwiiNtaba zeAtlas. Kwakhona indlu, kwisitayile se-deco yobugcisa kunye nepeyinti yethoni eluhlaza okwesibhakabhaka, kufanelekile ukuba undwendwele. Kodwa ukuqaqanjelwa kwesi sithuba kuko kwigadi, ezizezona zintle esixekweni ezenza ngaphandle.
Kwaye ezi zezi Iigadi zeLa Menara, eyona idumileyo eMarrakech. Zibekwe ngaphandle kweendonga, malunga nokuhamba kwemizuzu engamashumi amane ukusuka eMedina. Zenziwe ngenkulungwane ye-XNUMX zii-Almohad, ezayila inkqubo ye imijelo engaphantsi komhlaba ukubazisa kwi-Atlas. Yiyo kanye le ntaba isebenza njengendawo yasemva kwezitiya. Kwaye udonga, ecaleni kwetheyibhile yeethayile eziluhlaza zibizwa IMinzah, Gqibezela iseti.
Okokugqibela, phakathi kwento ekufuneka yenziwe eMarrakech, sicebisa ukuba sityelele ekuthiwa-njalo Ngcamla Ubulungiseleli, nangona ayiyiyo ngokufanelekileyo imyuziyam. Yindawo ye-avant-garde yemisebenzi emininzi ebamba imiboniso yethutyana. Ngumsebenzi wabayili baseNtaliyane UFabrizio Bizzarri y UAlesandra lippini.
UDar Cherifa, umlinganiso kumdlalo waseMarrakech
Este ikofu yoncwadi kunye negalari yenye yeentendelezo ezingaphakathi (oothixo) endala edolophini. Kule ndawo imangalisayo, ungabona imiboniso, iikonsathi zomculo wesintu kunye nemiboniso yeencwadi ngelixa uneti yeti.
Ngcamla i-gastronomy, enye yezinto zokwenza eMarrakech
Awunakho ukushiya iMarrakech ungakhange uzame i-gastronomy emnandi yendawo, apho iziqholo. Ungayenza kwiivenkile ezininzi zokutyela esixekweni, kodwa ungaya nakwizitalato zesitalato ezifakwe kwisikwere Djemaa el Fna ukutshona kwelanga.
Bobabini baya kukunika izitya eziqhelekileyo esikucebisa ukuba uzame. Phakathi kwabo, tajine, Efumana igama layo kwisitya esiphekwe kuso, imbiza yodongwe ekhethekileyo. Ihlala ineentlanzi okanye inyama enemifuno, iziqholo kunye namandongomane. Ezona tajines zithandwa kakhulu yinyama eneeplums kunye nenkuku enelamula.
Eyaziwayo umzala, ezenziwa ngeenkozo zengqolowa semolina exutywe namaqanda, inyama okanye imifuno. Kodwa, ukuba ukhetha isobho lokugcwalisa, unayo Harira, esiphantse sibe sisityu kuba sinemidumba, iitumato nenyama ekhapha amakhiwane okanye idates.
Iigadi zeLa Menara
Zaziwa ngokufanayo iikoftas, uhlobo lweebhola zenyama kunye neziqholo ezityiwa nemifuno, kunye imoushouiIyigusha eyosiweyo ngokupheleleyo kwi-grill ngelixa usongeza harissa, isosi eshushu. Ihlala ityiwa ngezandla ihamba nomzala, iplums okanye iiamangile. Kwelinye icala, okuqhelekileyo kwizitali zezitalato yi ukuda, Uhlobo lweplastikhi yeetapile ehonjiswe ngeesosi.
Kodwa, ukuba ukhetha iisaladi, unoku-odola i- zaalouk, ebilise i-aubergine, isosi yetumato negalikhi, kunye neepaprika eziswiti, incindi yelamuni kunye nekumin. Nje ukuba iphole, i-oyile, ityuwa kunye neminquma emnyama yongezwa. Eyona nto ibaluleke kakhulu nguyenge, isityu senkukhu ekhethiweyo okanye yegusha. Ungayala kwakhona kwintlanzi, kodwa kule meko ibizwa njalo iinkuni.
Ewe iilekese, la ipilisi Yingxubevange yeencasa njengoko iyikhekhe exuba inyama yenkukhu kunye namacwecwe e-puff pastry, ukuzaliswa kweziqholo kunye neeamangile kunye neswekile yomkhenkce nesinamoni. Unoku-odola iwaka leentlobo zeetartlets kunye nezinye iilekese ezinje uphondo lwenxala.
Okokugqibela, ukusela unokufumana kwizitali zezitalato Ijusi yendalo yeorenji. Kodwa isiselo ngokugqwesa yi iti yeminti, ebesichaze ngaphambili. Kukho isiko elijikeleze oku kuselwayo. Ngokubhekiselele kubanxila, abavunyelwe kwisitalato. Kodwa kokubini kwiihotele nakwimivalo enelayisensi uya kuzifumana ngaphandle kwengxaki.
Ukuqukumbela, uyazi ukuba wenzeni eMarrakech. Isixeko seAtlas sikunika yonke into esele siyikhankanyile kunye nokunye okuninzi. Ngandlela thile, sithe, ukuyindwendwela kufana nokuhamba usiya 'Ubusuku baseArabia'. Ungaziva ngathi ungena ngaphakathi inkcubeko yama-arab yeminyaka?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Kufuneka wenze ntoni eMarrakech
Iilwandle ezintle kwiAsturias, ukusuka eOviedo